Chhaharaa | चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डाले के जनाउँछ?
चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डाले के जनाउँछ?
काठमाडौं । छसस । विश्वका धेरै देशहरुका राष्ट्रिय झण्डाले सम्बन्धित देशको व्यवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ तर नेपालको चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डाले नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ? हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाले वर्तमान व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दैन र ? यो आम नेपालीहरुको चाँसोको विषय बन्नुपर्दछ ।
देशको राष्ट्रिय झण्डाले जुनसुकै बेला पनि सिंगो देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनुपर्दछ । प्राय विश्वका सबै देशका राष्ट्रिय झण्डाहरुले आआफ्नो देशको इज्जत प्रकृत अर्थात मुहार बोलिरहेको हुन्छ । नेपालको झण्डाले पनि विभिन्न फुलहरुले बनेको सुन्दर फुलबारी, नेपालको सुन्दर र अर्थपूर्ण राष्ट्रिय झण्डा हुनु आवश्यक ठानिन्छ । झण्डाले देशको यथार्थ बोकेको
हुनुपर्छ । झण्डा सबैको भित्रि मनले स्वीकार गर्ने हुनुपर्दछ । विश्वको झण्डाको बनावट र अर्थ हेर्दा मुल रुपमा उनीहरुको ऐतिहासिक भौगोलिक, धार्मिक र राष्ट्रिय एकता दर्शाएको पाइन्छ । कट्टर धर्ममा झण्डै सतप्रतिशत एकै धर्म रहेका कतिपय मुलुकहरुका आफ्ना धर्म सम्मत झण्डा रहेको पाइन्छ । इस्लाम धर्मसम्मत साउदी अरब, इसाई धर्मसम्मत स्वीट्जरल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड आदि रहेका छन् । विश्वमा अस्तित्वमा रहेका झण्डै २ सय मुलुकमध्ये लगभग ऐतिहासिक अर्थका छन् । अर्थात् भौगोलिक र ऐतिहासिक अर्थ बोक्ने झण्डाहरु विश्वमा लोकप्रिय मानिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हामी पनि हाम्रो देशको झण्डालाई अत्यन्तै माया र श्रद्धा गर्दछौं र मुटुभन्दा प्यारो ठान्दछौं । हामी नेपाली हौ भनेर झण्डा बोकेर गौरव ठान्दछौं । हामीले राष्ट्रप्रति, झण्डाप्रति दायित्व पुरा गर्न झण्डाको अर्थ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पढेका, बुझेका हाम्रो देशको अर्थ यस्तो छ ।
झण्डामा रहेको दुई भाग मध्ये चन्द्रमा रहेको माथिल्लो भागले नेपालको शाही परिवार र सूर्य अंकित तल्लो भागले नेपालको राणाशासन कालको प्रतिबिम्बित गरेको छ भनि विभिन्न पुस्तकहरुमा नेपाली झण्डाको ब्याख्या गरिएको छ । यो झण्डाको परिभाषामा सिंगो देश र व्यवस्था अनि जनतालाई सम्बोधन गरेको छैन । यही प्रतिबिम्बित गरिएको छ । हुनत यस झण्डालाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन निकै गाह्रो पनि भएको
आजको परिवेश, व्यक्तिगत चिन्तन, राष्ट्रिय चिन्तन मात्र नभएर ग्रह, उपग्रहको चिन्तन गर्नुपर्ने भएकोले हामी सानो देखिनै जसले काम गर्न छिटो र सजिलो अनि भावपूर्र्ण हुन सकोस् । हामी चाहान्छौं नेपाल विश्वमै विकास, प्रगतिको नमूना बन्न सकोस् । देशभित्र नेपालीलाई समेट्न सकोस् । नेपालको झण्डाले निश्चयनै नेपाल र नेपालीलाई समेट्न सकिएको छैन । यसर्थ आज नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बदल्नु पर्ने आभाष स्वभाविकै हो । देशको राजनैतिक संरचना सँगसँगै झण्डा परिवर्तन हुनु अतिनै आवश्यक पर्दछ । हाम्रो चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डाको अर्थ यस्तो छ–
निलो रंगले कृषि प्रधान देश नेपालको उर्वर माटोको प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसभन्दा माथिको सेतो रंगले हिमालय पर्वतको श्रृङ्खलाको प्रतिबिम्बित गर्दछ । सबैभन्दा माथिल्लो भागमा रहेको निलो रंगले निलो आकाश र निलो रंगको दाहिने कुनामा रहेको सूर्यले नेपाली राणा कालको प्रतिबिम्बित गर्दछ । तल्लो भागको रातो रंगले हाम्रो क्रान्तिकारी इतिहास र वर्तमान नेपाल बनाउनको लागि योगदान दिने सहिदहरुको सम्झनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ र कृषि प्रधान देश नेपालको उर्वर माटोको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
झण्डा परिवर्तन गर्न सजिलो नहुन सक्छ तर हामीले इतिहासबाट देश विदेशको विकास र परिवर्तनबाट शिक्षा लिदै अघि बढ्नुपर्छ । अफगान्तिान र इराकको झण्डा परिवर्तन भएको देश समय भएको छैन । यसैगरी चिन्ह, झण्डा पनि परिवर्र्तन भएको छ । पूर्वी टिमोरको झण्डा परिवर्तनको अनुभव पनि हामीसँग छ । झण्डा बनाउन सबैभन्दा छिटो, सस्तो र सजिलो जापान, बंगलादेश, लिबिया रहेका छन् । राष्ट्रिय झण्डा देशव्यापी बनाउनु पर्ने भएकाले हामीले सरल उपाय सोच्नुपर्दछ । नेपालको झण्डामा पनि केही परिवर्तनको आवश्यक छ । किनभने झण्डाको मूख्य मर्म भनेको देश र जनतालाई र व्यवस्थालाई निर्विकल्प रुपमा समेट्नुपर्दछ । नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय झण्डाले प्राकृतिलाई समेटेको छ तापनि मूल गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई समेटेको पाइन्न । यसर्थ नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई ससम्मानका साथ परिवर्तन गर्र्नुपर्दछ जुन झण्डाले कुनै वर्गको चाकडी गरेको नभई स्वाधीनताको प्रतिबिम्बित गरेको होस् । जसले गर्दा विश्वसामु सँधैभरी नेपालीहरुको शीर गौरवको साथ ठाडो बनिरहोस् ।